”Nin qoyani biyo iskama dhoowro!” – Maraykanka oo aqoonsiga Golan ku muujiyay waxa ka daran ee kasoo socda!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Nin qoyani biyo iskama dhoowro!” – Maraykanka oo aqoonsiga Golan ku muujiyay...
”Nin qoyani biyo iskama dhoowro!” – Maraykanka oo aqoonsiga Golan ku muujiyay waxa ka daran ee kasoo socda!!
(Washington, DC) 27 Maarso 2019 – “Aqoonsiga” Maraykanka ee ku saabsan in Golan Heights ay ka mid tahay geyiga ay ka taliso Israel ayaa lagu tilmaamay tillaabo waalli ah, balse aan aad loola yaabaynin, marka dib loo eego diiwaankiisa.
Waayo? Washington lafteeda ayaan xeerin ama ixtiraamin madax banaanida dalalka kale, iyadoo ay xilliyadan casriga ah dheceen weerarro badan oo lagu qabsaday dalal madax bannaan.
Madaxwaynaha Maraykanka ee Donald Trump ayaa Isniintii saxiixay in buurahan istaraatijiga ah ee khayraadka badani ku jiro ay tahay qayb si rasmi ah uga tirsan Israel..
RW Benjamin Netanyahu ayaa isagoo isu bogbogaya go’aanka Trump ku tilaamay “cadaalad taariikhi ah” tiiyoo uu iska indha tirayo cadaalad darrada cad ee uu u bareerayo.
Warqaadka New York Times ayaa tillaabada Trump ku tilmaamay “maagis aan micne lahayn” wuxuuna xusay “inay tahay wax ka tarjumaya danaha Israel, balse aanay wax dan ihi ugu jirin Maraykanka.”
Waloow uu wargaysku sidaa leeyahay, misna meesha kama marna dan Maraykan, waayo waxaa aad loo hadal hayaa in buuralayda Golan uu shidaal cidaadan yahay, taasoo lagu sheegay qiimayn horay loo sameeyay.
Yeelkeede, warqaadka NYT waloow uu qayb ahaan saxnaan karo, misna ma aha wargays ay gacmihiisu nadiif yihiin, waayo wuxuu aalaaba u sacab tumaa faragelinnada faraha badan ee uu Maraykanku ka sameeynayay caalamka labadii toban sanaale ee tegey.
Isku soo xooriyoo, go’aanka uu Maraykanku ku taageerayo Israel oo aan ahayn mid iminka bilowday ama go’aankani yahay midka ugu daran, waxay kaliya muujinaysaa inuusan ahayn dal ay laftiisa wax u dhowran yihiin marka ay timaado xeerinta Xeerarka u degsan caalamka, xuquuqul insaanka iyo xitaa dimoqraadiyadda oo ah kelmado uu Maraykanku sheegto.
Waxaa se kasii daran waxa kasoo socda Maraykanka oo si kasta oo uu u khaldanaa awal waxyaabaha qaar ka qalloon jirey.
Previous article”Ma adigaas loo haysto musuqa & laaluushka!” – Ilhaan Cumar oo ka jawaabtey duurxulkii Netanyahu
Next articleDAAWO: Gabar Soomaaliyeed oo wacdaro ka dhigtay KEDIS Carbeed oo caan ah!